Raynaud Phenomenon (ရေးနောဖြစ်ရပ် ) - Hello Sayarwon
Raynaud Phenomenon (ရေးနောဖြစ်ရပ် )
Dr. Hlaing Min Ko Ko မှ ရေးသားသည်။ 27/11/2019 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Raynaud Phenomenon (ရေးနောဖြစ်ရပ် ) ကဘာလဲ။
ရေးနောဖြစ်ရပ် သို့မဟုတ် ရေးနောရောဂါသည် လက်ချောင်း ခြေချောင်းများ၌ အေးလွန်းသည့်အခါ စိတ်ဖိစီးသည့်အခါများတွင် အေးစက်ထုံကျင်ခြင်း ဖြစ်လာစေသည့်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ရေးနောရောဂါတွင် အရေပြားသို့သွားသော သွေးလွှတ်ကြောငယ်များ ကျဉ်းသွားစေပြီး သွေးစီးဆင်းမှုကို ကန့်သတ်သွားစေပါသည်။
အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများက ရေးနောရောဂါပိုဖြစ်နိုင်၏။ အေးသောဒေသများတွင် နေထိုင်ကြသူများပိုအဖြစ်များသည်။
ရေးနောရောဂါကုထုံးမှာ ပြင်းထန်မှုနှင့် တခြားရောဂါများ ရှိမရှိပေါ် မူတည်ပါသည်။ လူအများစုတွင် ရေးနောရောဂါကြောင့် ဘာမှမလုပ်နိုင်ဖြစ်ရတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘဝအရည်အသွေးကိုပါ ကျစေပါသည်။
Raynaud Phenomenon (ရေးနောဖြစ်ရပ် ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါသည် အလွန့်အလွန်အဖြစ်များ၏။ အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများတွင် ပိုအဖြစ်များ၏။ အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်သည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်သောအချက်အလက်များကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါသည်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
Raynaud Phenomenon (ရေးနောဖြစ်ရပ် ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ရေးနောရောဂါ၏ လက္ခဏာများမှာ သွေးကြောကျဉ်းခြင်း၏ ပြင်းထန်မှု၊ ကြာချိန်နှင့် အကြိမ်ရေပေါ်မူတည်ပါသည်။ အဖြစ်များသော လက္ခဏာများမှာ
လက်ချောင်း ခြေချောင်းများ အေးစက်ခြင်း
အအေး သို့မဟုတ် ဖိစီးမှုကြောင့် အရေပြားအရောင်ပြောင်းသွားခြင်း
နွေးသွားသည့်အခါ၊ ဖိစီးမှုသက်သာသွားသည့်အခါ ထုံခြင်း တဆစ်ဆစ်ဖြစ်ခြင်း
ရေးနောရောဂါဖောက်သည့်အခါ ဖြစ်နေသောအရေးပြားမှာ ပထမဆုံးအဖြူရောင် ပြောင်းသွားမည်။ ထို့နောက်တွင် ဖြစ်သောနေရာမှ အပြာရောင်အဖြစ်ပြောင်းသွားကာ အေးပြီးထုံကျင်လာပါလိမ့်မည်။ နွေးလာပြီးနောက် သွေးလှည့်ပတ်မှုပြန်ကောင်းလာသည့်အခါ ဖြစ်သောနေရာသည် အနီရောင်ပြန်သန်းလာကာ တဆစ်ဆစ်နှင့် ထုံကျင် ဖောင်းကြွလာပါလိမ့်မည်။ အရောင်ပြောင်းလဲသည့်ဖြစ်စဉ်မှာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မတူနိုင်ပါ။ လူအားလုံး အရောင်သုံးရောင်လုံး ခံစားရသည်မဟုတ်ပါ။
ရေးနောမှာ လက်ချောင်းနှင့် ခြေချောင်းများ၌ အဖြစ်များသော်လည်း တခြားနေရာများတွင်ပါ ဖြစ်တတ်ပါသေးသည်။ ဥပမာ နှာခေါင်းထိပ်၊ နှုတ်ခမ်း၊ နားနှင့် နို့သီးခေါင်းများ။ ပူနွေးပြီးနောက် ပုံမှန်သွေးလှည့်ပတ်မှုပြန်ရရန် အနည်းဆုံး ၁၅ မိနစ် ကြာတတ်ပါသည်။
ရေးနောရောဂါ ခပ်ပြင်းပြင်းဖြစ်ဖူးလျှင် သို့မဟုတ် ဖြစ်သည့်လက်များခြေများတွင် အနာများ ပိုးဝင်ခြင်းများ ရှိလာလျှင် ဆရာဝန်ဆီ ချက်ချင်းပြပါ။
Raynaud Phenomenon (ရေးနောဖြစ်ရပ် ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ရေးနှောရောဂါဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်း တိတိကျကျကို ဆရာဝန်များနားမလည်သေးပါ။ သို့သော် လက်များခြေများတွင်ရှိသော သွေးကြောများမှာ အအေးချိန်နှင့် ဖိစီးမှုကို သာမာန်ထက်ပိုတုန့်ပြန့်ရပါသည်။
ရေးနောတွင် လက်ချောင်းခြေချောင်းများရှိ သွေးလွှတ်ကြောငယ်လေးများက အအေး သို့မဟုတ် ဖိစီးမှုနှင့်ထိတွေ့ပါက ကျဉ်းသွားပြီးနောက် သွေးစီးဆင်းမှုကို တန့်သွားစေသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့် ထိုသွေးကြောလေးများ အနည်းငယ်ထူလာပြီး နောက်ပိုင်းတွင်လည်း သွေးစီးဆင်းမှုကို ပိုတန့်စေနိုင်၏။
အအေးချိန်သည် ရောဂါအဖောက်ဆုံး လှုံ့စော်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အအေးနှင့်ထိတွေ့ခြင်း ဥပမာ ရေအေးထဲတွင် လက်ထည့်ခြင်း၊ ရေခဲသေတ္တာထဲမှ တစ်ခုခုယူလိုက်ခြင်း၊ လေအေးနှင့်ထိတွေ့မိခြင်းတို့သည် လှုံ့စော်မှုများ ဖြစ်ကြပါသည်။ တစ်ချို့လူများတွင် စိတ်ခံစားမှုကြောင့်ဖြစ်သော ဖိစီးမှုသည် ရေးနောရောဂါဖောက်စေသည့်အချက်ဖြစ်သည်။
မူလရေးနော – ရေးနောရောဂါဟုပဲ ရိုးရိုးခေါ်သည်။ သွေးကြောကျဉ်းမှုကို ဖြစ်စေသည့် အောက်ခံရောဂါမရှိပဲ သူ့အတိုင်းဖြစ်လာသော အခြေအနေမျိုးဖြစ်သည်။
တစ်ဆင့်ခံရေးနော – ဒါကိုတော့ ရေးနောဖြစ်ရပ်ဟုသုံး၏။ အောက်ခံရောဂါတစ်ခုကြောင့် ဖြစ်ရခြင်းပင်။ မူလပုံစံထက် တစ်ဆင့်ခံမှာ အဖြစ်နည်းသော်လည်း ဖြစ်လိုက်လျှင် ပိုပြင်းထန်၏။ အသက် ၄၀ အရွယ်လောက်တွင်မှ ရေးနောလက္ခဏာများ စပေါ်လာတတ်ပါသည်။ မူလရေးနောထက် ပေါ်တာနောက်ကျပါသည်။
တွယ်ဆက်တစ်ရှူးရောဂါများ – အရေပြားအား မာကြောပြီး အမာရွတ်များထစေသော စကဲလရိုဒါးမားလို ရှားပါးရောဂါရှိသူများတွင် ရေးနောဖြစ်နိုင်၏။ ရေးနောဖြစ်စေနိုင်သော တခြားရောဂါများမှာ လူးပတ်စ်၊ လေးဖက်နာနှင့်တူသော အဆစ်ရောင်ခြင်း၊ Sjogren’s Syndrome တို့ဖြစ်သည်။
သွေးလွှတ်ကြောရောဂါများ – ရေးနောဖြစ်ရပ်သည် သွေးလွှတ်ကြောများအားထိခိုက်စေသော ရောဂများဖြစ်သည့် နှလုံးသွေးကြော အဆီပိတ်ခြင်း၊ လက်နှင့်ခြေရှိသွေးကြောများ ရောင်ရမ်းသောရောဂါ (ဘားဂါရောဂါ) တို့နှင့် ဆက်စပ်မှုရှိပါသည်။ အဆုတ်များရှိ သွေးလွှတ်ကြောများ၌ သွေးပေါင်တိုးခြင်း (မူလအဆုတ်သွေးပေါင်တိုးခြင်း)သည်လည်း ရေးနောနှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။
Carpal tunne; syndrome – ဤရောဂါတွင် လက်ရှိ အဓိကအာရုံကြောမကြီးအား ဖိအားဖြစ်နေရာမှ လက်တစ်ခုလုံး နာပြီးထုံနေခြင်းဖြစ်သည်။ လက်သည် အအေးနှင့် ထိမရပဲ ရေးနောကဲ့သို့ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ရခြင်း သို့မဟုတ် တုန်ခါခြင်း – စန္ဒယားတီးခြင်း သို့မဟုတ် တူညီသောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတည်းကို အချိန်ကြာမြင့်စွာလုပ်ရခြင်း၊ တုန်ခါသည့်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုရခြင်းများသည် ရေးနောဖြစ်စေရန် လမ်းစများဖြစ်၏။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း – ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် သွေးကြောများကိုကျဉ်းစေပြီး ရေးနောဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
ထိခိုက်မိခြင်း – အလက်နှင့် ခြေများတွင် လက်ကောက်ဝတ်ကျိုးခြင်း၊ ခွဲစိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် နှင်းကိုက်နာဖြစ်ခြင်းများ ဖြစ်ဖူးလျှင် ရေးနောဖြစ်ရပ် ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
တစ်ချို့သောဆေးများ – သွေးတိုးအတွက်သုံးသော ဘီတာဘလော့ကာလိုဆေးများ၊ Ergotamine, sumatriptan များပါသော ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ပျောက်ဆေးများ၊ အာရုံမစိုက်နိုင်သော/ တက်ကြွလွန်သော ရောဂါများတွင်သုံးသောဆေးများ၊ တစ်ချို့သော ကင်ဆာဆေးများ၊ သွေးကြောများကိုကျဉ်းစေသောဆေးများ စသည်တို့သည် ရေးနောနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
ငါ့ဆီမှာ Raynaud Phenomenon (ရေးနောဖြစ်ရပ် ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
မူလရေးနောရောဂါကိုဖြစ်စေနိုင်သည့် အကြောင်းရင်းများမှာ –
လိင် – မူလရေးနောမှာ အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများတွင် အဖြစ်များ၏။
အသက် – လူတိုင်းလိုလို ဒီရောဂါဖြစ်နိုင်သော်လည်း မူလရေးနောမှာ အသက် ၁၅ နှင့် ၃၀ ကြားတွင် စတင်လေ့ရှိသည်။
ရာသီဥတု – ရောဂါသည် အေးသော ဒေသတွင်နေထိုင်သူများ၌ အဖြစ်များ၏။
မိသားစုမျိုးရိုး – မျိုးရိုးရှိလျှင် ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများသည်။ မူလရေးနော သုံးပုံတစ်ပုံတွင် မိဘ၊ သားချင်း၊ ရင်သွေးတို့၌ ရောဂါရာဇဝင် ရှိတတ်သည်။
တစ်ဆင့်ခံရေးနောကို အဖြစ်များစေသည့် အကြောင်းရင်းများ –
ဆက်စပ်နေသော ရောဂါများ – စကာလရိုဒါးမားနှင့် လူးပတ်ကဲ့သို့ရောဂါများ
အလုပ်အကိုင် – တစ်ခုတည်းကို ထပ်တလဲလဲလုပ်ရသောအလုပ် တုန်ခါနေသောပစ္စည်းများကိုစီမံရသည့်အလုပ် စသည်တို့တွင် တစ်ဆင့်ခံရေးနောကို ဖြစ်စေတတ်၏။
တစ်ချို့သောပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့မိခြင်း – ဆေးလိပ်၊ သွေးကြောများတွင် အာနိသင်ရှိသော ဆေးများ၊ ဗီနိုင်းကလိုရိုက်လို ဓါတုပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့ရခြင်းက ရေးနောရောဂါဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
Raynaud Phenomenon (ရေးနောဖြစ်ရပ် ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်မှ ရောဂါရာဇဝင်နှင့်လက္ခဏာများကို မေးမြန်းပြီး စမ်းသပ်ပါလိမ့်မည်။ တခြားသော သဏ္ဍာန်တူလက္ခဏာများရှိတတ်သည့် အာရုံကြောညှပ်ခြင်းလိုကိစ္စများကိုပါ ရှာဖွေရန် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပါမည်။
မူလနှင့် တစ်ဆင့်ခံရေးနောကိုခွဲခြားရန်အတွက် ဆရာဝန်မှ Nail Fold Capillaroscopy ဟုခေါ်သော စစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ စစ်ဆေးရာတွင် ဆရာဝန်မှ သင့်၏လက်သည်းခွံအခြေကို အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းနှင့် ကြည့်ရှု့စစ်ဆေးပါမည်။ လက်သည်းခွံအခြေတွင်ရှိသော ဆံချည်မျှင်သွေးကြောများ ဖောင်းနေခြင်းသို့မဟုတ် ပုံစံပျက်နေခြင်းရှိလျှင် အောက်ခံရောဂါရှိနေကြောင်း သိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် တစ်ချို့သော တစ်ဆင့်ခံရောဂါများကို ဒီနည်းဖြင့် သိရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
တခြားသောအခြေအနေကို ဆရာဝန်မှသံသယရှိလျှင် ဥပမာ ကိုယ်ခံအားမှပြန်တိုက်သောရောဂါ သို့မဟုတ် တွယ်ဆက်တစ်ရှူးရောဂါများက ရေးနောကိုဖြစ်စေလျှင် သွေးစစ်မှုများကို ပြုလုပ်ရပါလိမ့်မည်။
Antinuclear ပဋိပစ္စည်းများစစ်ဆေးခြင်း – ထို ပဋိပစ္စည်းများရှိကြောင်း တွေ့ရပါက ကိုယ်ခံအားစနစ်တက်ကြွနေကြောင်း သိနိုင်ပြီး တွယ်ဆက်တစ်ရှူးရောဂါများ သို့မဟုတ် တခြားသော ကိုယ်ခံအားမှပြန်တိုက်သည့်ရောဂါများတွင် တွေ့ရတတ်ပါသည်။
Erythrocyte အနည်ကျနှုန်း – ဤစစ်ဆေးမှုသည် သွေးနီးဥများ ပြွန်ထဲသို့ အနည်ကျသည့်နှုန်းကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံမှန်နှုန်းထက် ကျနေပါက ကိုယ်ခံအားမှ ပြန်တိုက်သောရောဂါ သို့မဟုတ် ရောင်ရမ်းနာများ ဖြစ်နေကြောင်း သိနိုင်ပါသည်။
ရေးနောအား အတည်ပြုနိုင်မည့် စစ်ဆေးမှုတစ်ခုတည်းဆိုသည်မှာ လုံးဝမရှိပါ။ ဆရာဝန်သည် သွေးကြောရောဂါများ မဟုတ်ကြောင်းသိနိုင်သည့် စစ်ဆေးမှုများ၊ ရေးနောနှင့်ဆက်စပ်နေသည့် ရောဂါကို ပြနိုင်မည့်စစ်ဆေးမှုများကို ပြုလုပ်ခိုင်းနိုင်ပါသည်။
Raynaud Phenomenon (ရေးနောဖြစ်ရပ် ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ရေးနောရောဂါအပျော့စားများကို အေးသည့်အခါ ထူထူထဲထဲဝတ်ခြင်း၊ ခြေအိတ်၊ လက်အိတ်ထူထူဝတ်ခြင်းတို့ဖြင့် အဆင်ပြေနိုင်ပါသည်။
ပြင်းထန်သည့်အခြေအနေများကိုတော့ ဆေးဖြင့်ကုသရပါသည်။ ကုသရသည့် ရည်ရွယ်ချက်များမှာ –
ရောဂါဖောက်ခြင်းအကြိမ်ရေနှင့် ပြင်းထန်နှုန်းကို လျော့ချရန်
အောက်ခံရောဂါ သို့မဟုတ် အကြောင်းရင်းများကို ကုသရန်
လက္ခဏာဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းပေါ် မူတည်ပြီး ဆေးများကိုပေးရန်ပါသည်။ သွေးကြောများကို ကျယ်စေပြီး သွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းစေရန် ဆရာဝန်မှအောက်ပါတို့ကို ပေးပါလိမ့်မည်။
ကယ်လ်စီယမ်ပြွန်ပိတ်ဆေးများ – ဤဆေးများသည် လက်နှင့်ခြေမှသွေးကြောများကို ပျော့သွားစေပြီး ကျယ်လာစေသည်။ ထို့ကြောင့် ရေးနောရှိသူများတွင် ရောဂါအကြိမ်ရေ ပြင်းထန်နှုန်းကို ထိန်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုဆေးများသည် လက်ချောင်း ခြေချောင်းများရှိ အနာများကို အကျက်မြန်စေရန်လည်း ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ – nifedipine (Afeditab CR, Procardia), amlodipine (Norvasc) and felodipine (Plendil).
Alpha blockers – တစ်ချို့လူများတွင် Alpha blockers ဟုခေါ်သော ဆေးများနှင့် သက်သာကြသည်။ ထိုဆေးများသည် နော်အက်ပီနက်ဖရင်း သွေးကြောကျဉ်း ဟော်မုန်းကို ဆန့်ကျင်ပေးနိုင်ပါစည်။ ဥပမာ – prazosin (Minipress) and doxazosin (Cardura)
သွေးကြောကျယ်ဆေးများ – တစ်ချို့ဆရာဝန်များက သွေးကြောများကို ပြေလျော့စေသောဆေးများဖြစ်သည့် nitroglycerin ခရင်များကို လက်ချောင်းမှ အနာများအားလိမ်းရန် ပေးလေ့ရှိပါသည်။ ဤရောဂါအတွက်ပေးလေ့ရှိသောဆေးများမှာ သွေးကျဆေးများဖြစ်သော losartan (Cozaar)၊ ပန်းညှိုးခြင်းအတွက်ပေးသော sildenafil (Viagra, Revatio)၊ စိတ်ကျရောဂါကုဆေးများ fluoxetine (Prozac, Sarafem) နှင့် ပရိုစတာဂလန်ဒင်ဟုခေါ်သော ဆေးများက ရေးနောရောဂါကို သက်သာစေပါသည်။
သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဆိုတာ သိနိုင်ရန်အတွက် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ ဆေး၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့် အာနိသင်နည်းသွားပြီ ဆိုပါက ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။
တစ်ချို့ဆေးမျာက သွေးကြောများကို ကျဉ်းစေသောကြောင့် ရေးနောရောဂါအား ပိုဆိုးစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အောက်ပါဆေးများကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါသည်။
တစ်ချို့သော အအေးမိပျောက်ဆေးများ။ pseudoephedrine (Chlor-Trimeton, Sudafed) ပါသော ဆေးများ။
ဘီတာဘလော့ကာများ – ဤဆေးများတွင် သွေးပေါင်ကျဆေးများနှင့် နှလုံးဆေးများ ပါဝင်ပါသည်။ ဥပမာ – metoprolol (Lopressor, Toprol-XL), nadolol (Corgard) and propranolol (Inderal, InnoPran XL)
တစ်ချို့သော ပြင်းထန်ရေးနောရောဂါများတွင် ဆေးထက် တခြားသောကုထုံးများကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
အာရုံကြောခွဲစိတ်ခြင်း – လက်နှင့်ခြေရှိ ဆင်ပသက်တစ်အာရုံကြောများသည် အရေပြားမှသွေးကြောများကို ကျဉ်းစေ ကျယ်စေထိန်းချုပ်နိုင်၏။ ထိုအာရုံကြောများကို ဖြတ်လိုက်ခြင်းက အလွန်အမင်းတုန့်ပြန်ခြင်းကို ဖြတ်ထားနိုင်ပါမည်။ ဖြစ်သည့် ခြေလက်များတွင် အသေးစားခွဲစိတ်ခြင်းဖြင့် ဆရာဝန်သည် သွေးကြောပတ်ပတ်လည်မှ အာရုံကြောလေးများကို ဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုခွဲစိတ်မှုဖြင့် ရောဂါဖောက်သည့် အကြိမ်ရေနှင့် ကြာချိန်ကို လျော့ချနိုင်သော်လည်း အမြဲတမ်းအောင်မြင်သည်တော့မဟုတ်ပါ။
ဓါတုဆေးများထိုးခြင်း – ထုံဆေးများ သို့မဟုတ် onabotulinumtoxin type A (Botox) တို့အား ဖြစ်သည့် ခြေလက်တို့တွင် ဆင်ပသက်တစ်အာရုံကြောများအား တားရန် ထိုးနိုင်ပါသည်။ လက္ခဏာများပြန်ဖြစ်လာလျှင် ထပ်လုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက ရေးနောဖြစ်ရပ် ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနှင့်အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် ရေးနောဖြစ်ရပ် ကိုကုသသည့်နေရာနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရာတွင် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
ဆေးလိပ်မသောက်ပါနှင့်။ ဆေးလိပ်သည် သွေးကြောများကို ကျဉ်းစေသောကြောင့် အရေပြားအပူချိန်ကိုကျစေပါသည်။ ဘေးမှ ဆေးလိပ်ငွေ့ရှုခြင်းကလည်း ရေးနောကို ဆိုးဝါးစေနိုင်ပါသည်။
လေ့ကျင့်ခန်း – လေ့ကျင့်ခန်းသည် သွေးလှည့်ပတ်မှုကို ကောင်းစေပါသည်။ တစ်ဆင့်ခံရေးနောဆိုပါက အအေးထဲ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
စိတ်ဖိစီးမှုကို ထိန်းပါ – စိတ်ဖိစီးနိုင်သည့် အခြေအနေများကို သိရှိပြီး ရှောင်ကျဉ်နိုင်ပါက ရောဂါဖောက်ခြင်းအကြိမ်ရေကို နည်းစေပါမည်။
ရုတ်တရတ် အပူချိန်ပြောင်းသွားခြင်းမျိုးကို ရှောင်ပါ။ ပူသောနေရာမှ ချက်ချင်းခြင်း အဲကွန်းခန်းထဲဝင်တာမျိုးမလုပ်ရပါ။ ဖြစ်နိုင်ပါက အေးခဲကုန်စိမ်းရောင်းသော နေရာများသို့ မသွားပါနှင့်။
1. Raynaud’s disease. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/raynauds-disease/basics/definition/con-20022916. Accessed6Feb 2017
2. What Is Raynaud’s Phenomenon? https://www.niams.nih.gov/health_info/raynauds_phenomenon/raynauds_ff.asp. Accessed6Feb 2017
3. Raynaud Phenomenon. http://emedicine.medscape.com/article/331197-overview. Accessed6Feb 2017